Umfana uthanda intombazana embi, andiyiqondi - kutheni?
Mhlawumbi, akukho namnye oza kuthethana naloo mazwi ukuba bonke abantu banomdla ohlukileyo xa kuziwa kuvelwano lomntu. Kukho imilinganiselo evumelekileyo yokubukeka, edlalwa kwiindawo ezidumile emhlabeni, kukho "ubuhle obungabhaliweyo" abahlala kufuphi nathi kwaye banandipha ukuthandwa kakhulu phakathi kwabantu. Nangona kunjalo, abakwazi ukukhonza njengento efanelekileyo kubo bonke abantu. Kwaye kaninzi kangakanani, ukujonga isibini esidlula kuwe, ingcamango ikhanya ngqondweni wethu: "Hmm, lo mfana uthanda intombazana embi, andiyiqondi - kutheni kwenzeka ntoni na kuthi?". Ngokuqinisekileyo, uyamthanda, uyindoda enhle, kwaye ecaleni kwakhe ehamba ngokuziqhenya into engahambi kakuhle, engabonakaliyo, engenabubele.
Nangona, enyanisweni, mhlawumbi intombazana yayifudumele kakhulu, yazibala ukuziphakamisa, okanye yayingenamandla okwaneleyo okuhlamba iinwele zakhe. Okanye mhlawumbi nje wazala-yingakho unalo hlobo. Kwaye, ekugqibeleni, mhlawumbi unesimo esincinci nesincinci yehlabathi - kunye nesoka lakhe liyamthanda lona.
Uyazi, oku kuphazamiseka kwendalo: "Umfana uthanda intombazana embi, andiyiqondi - kutheni? !!!" kwenzeka, njengomthetho, xa umntu ehamba ecaleni kwendodakazi engenabubele uyasihawukela. Nantsi entloko yethu yakhawuleza yenze i-fall of competition, siqala ukuhlalutya nokuthelekisa. Oku kwenzeka kwizinzulu zenkqutyana, ngamanye amaxesha asiqapheli nokuba siqala njani ukuphonononga abanye abantu. Emva koko isitampu "intombazana engalunganga" iyazalwa, kwaye iyazalwa ngokubanzi ngenxa yengqumbo yokuba umntu ulunge kwaye ulungile.
Ndathandana nentombazana eyingozi
Uyazi, enyanisweni, nayiphi na indoda inokuthanda nayiphi na intombazana-nokuba yinto embi, kodwa ngenxa yezinto ezithandayo akuphikisi. Yintoni ongayithandiyo ngayo? Amehlo amakhulu kakhulu? Amadoda amaninzi adonsa amantombazana amakhulu. Ukungabikho kwezimonyo ebusweni? Jonga ngokukhawuleza-mhlawumbi akubi, kwenzeka ukuba loo mntu uthanda ubuhle bemvelo, kunye nezimonyo zingabonakalisa nakwezinye iintombazana. Mhlawumbi. Ucinga ukuba, "Andiyiqondi: kutheni uthanda intombazana enomfanekiso onjalo? Unomdla ogqithiseleyo! ", Kodwa, kwakhona, kukho abaqapheli be-pop abahle kakhulu kweli hlabathi. Isalathisi somfazi asikhenxiswanga okwamanje. Mhlawumbi awukho iifom ezijikelezileyo kwaye unomona onomona? Nangona kunjalo, oku kwachasene noko, intombazana enqabileyo ayiyiqondiyo: njani umntu angayithandana nentombazana enomhlaza onokuzibala zonke iimbambo?
Kodwa, ndicinga ukuba ukubonakala kungakona nto ebalulekileyo kubudlelwane. Ngokuqinisekileyo, into yokuqala into yokuba nayiphi na indoda inika ingqwalasela xa ikwazi ukuba intombazana yinkcazelo yakhe yangaphandle, imbonakalo yobuso, sibalo ... Kodwa, mhlawumbi, ekuqaleni wazinikezelwa kwiingcingo zezilwanyana zezilwanyana ezazigcina zithe tye. Kwaye ke, xa ndaqonda ukuba uthando lugqithise ngaphezu kobuso kunye nomfanekiso, xa ndivakalelwa ukuba inkwenkwe yakhe yaqonda oko, waqala ukuzivumela ukuba abe yindalo kwaye amnandi kuye. Kutheni, ngokwenene?
Emva kwayo yonke into, kuyamangalisa ukuba phakathi kwayo yonke intsebenziswano indoda leyo yazama ukuqonda i-intsi yelizwe lakhe intombi yakhe, ukuvavanya iimpawu zakhe zomntu, ukwazi umlingani wakhe nokuthanda ngento enokuthanda ukuyilungisa.
Musa ukukhawuleza ngokusola umntu ngenxa yokungabi nantoni, ukuba uhamba naye kumbi, ngoluvo lwakho, intombazana. Emva koko, sekude kubekho ubungqina bokuthi akukho babhinqa ababi, bekungabikho kwaye abayi kuze kubekho. Sonke sidinga umntu, umntu ubalulekile kwaye umntu uyakhathalela. Kwaye ukuba kukho imantombazana enhle kweli hlabathi, kufuneka kubekho ambalwa kubo-mhlawumbi oko kuya kuba nelungelo elifanelekileyo elidibana kuzo zonke ikhonkco? Phakathi kwezigidi zokuthandwa kweentlobo zabafana, kukho ixesha eliza kukukhetha - nokuba unjani. Emva kwakho konke, akusiyo ubuhle kuyo yonke into-ihamba ngexesha kwaye iphela, kuphela ubuhle bomphefumlo buhlala - bukhula ngokuphindaphindiweyo kunyaka ngamnye, kufuneka kuhlonishwe. Abo babanikela ingqalelo kuphela kwi-"impahla" yokubonakalayo - basalokhu bahlaza kwaye bengaxilanga ukuba bakhe ubudlelwane obunzulu, kuba "banokukhitywa kwindlela yokwenyaniso" naluphi na umkhwa omhle. Ngoko ke, ukuba ubona indlela idibaniso elidibana ngayo nentlanganiso, inxalenye yesetyhini ongeke uyibize inhle, kodwa isiqingatha sabantu esibheka intombi yakho sinothando olungenammiselo - vuyisa. Jabulela ukuba ubonile lonke uthando olufanayo kwimbonakalo yalo ecacileyo, okwenene, engazi imingcele, ukunyamezela imaski, Uthando!
Ewe, iimeko zihlukile. Kwihlabathi lanamhlanje, iimvakalelo zihlawulwa ngokungakumbi kunokuba, umzekelo, imali. Ewe, kuyazisola kwaye kuphantsi, nangona kunjalo inyaniso ehamba kunye nathi. Hayi, asinjalo sonke, kodwa abantu abanamathuba amaninzi baninzi.
Esi, mhlawumbi, siye saqhelana nomxholo othi "umfazi ogciniweyo", okuthethwa yile ntombazana ekhangele isityebi, unokutshata, "Papa", ufuna ukufumana imali eninzi kuye. Enyanisweni - ubuhenyu obufanayo, kodwa ezinye iintombazana zivakalelwa ngokwenene ...
Ngokukhawulezileyo, kungekudala kukho okubizwa ngokuthi "iAlphonse", isicwangciso esisezantsi sentlalo yabantu, abangenako ukuzenza izenzo zamadoda, kwaye bakhetha ukuphila ngeendleko zabanye. Ewe, iphesenti yala madoda ekhula imihla ngemihla - kunye phantse nganye yintombazana enemali. Kwaye akukho nto ibaluleke kakhulu - yintoni idatha yangaphandle "yexhoba" lika-Alphonse.
Nakhu, ke, bonke bashiywe ukuphumelela. Ngenxa yokuba umfana-uAlphonse ngokukhawuleza uneemali ezilindelwe ixesha elide, ngenxa yokuba engenayo imali engayinayo. Le ntombazana inika wonke umntu: iyakususa indawo yokuhlala ephathekayo, ekhonza njengesidleke sothando. Mhlawumbi ukuba uyaziphethe kakuhle, uya kuthenga naye imoto. Ngaphambi kwakhe kuya kuba nethuba elihle lokuziphendulela kwi-strata ephakamileyo yoluntu, apho sele efuna khona.
Kwaye le ntombazana ayikho embi - ithola inceba, enomona, onokuthi ungayifumana ibali elithembekileyo kunye nazo zonke izihloko ezifunekayo kunye nezihloko eziya kumnceda ukuba asebenzise isangqa soqhagamshelwano lwakhe.
Ngoko musa ukukhawuleza ukumangaliswa xa ubona umfana esitalatweni ehamba nentombazana embi-mhlawumbi ungazi kakhulu ngobomi babo ...
I-Apple isinkwa ngamantongomane
I-Gigantism, i-acromegaly kunye ne-dwarfism
Izizathu ezili-11 zokuba zilolo
Iibhontshi kunye ne-tshokoleta kunye neehofi
Iresiphi yesitifiketi ye-pistachio cheesecake ngoMatshi 8
Kutheni kunzima ukufumana uthando?
Iresiphi yaseBurito yeSidlo sakusasa
Umlingo wesempuma: ukuhlobisa kweBhayrazare yaseYerusalem ngeempawu ze-Ural
Imithwalo yama-orthopedic kunye neemitha
Ukunyamekela kweentyatyambo ze-fuchsia
Umntwana ongezantsi kwaye ongenakulingatha iminyaka eli-8 ubudala
Uncwadi lweRussia lwangoku lwabantwana
Ukutya kweswekile: indlela yokutya ngokufanelekileyo?
Iipancakes ezinokuzaliswa kwesibindi